Hevitra mandalo;Resaky ny mpitsimpona akotry : poa-droa andrasan’ny minisitry ny Mponina | NewsMada
Hevitra mandalo;Resaky ny mpitsimpona akotry : poa-droa andrasan’ny minisitry ny Mponina
Hitondra soa ho azy anie ity taona ity. Fahasoavana voalohany dia ny fahatongavana soamantsara an’ilay vahiny kely andrasan’izy roa kely izay vao nankalazaina tamin’ny fomba manetriketrika ny fanambadiany, volana vitsivitsy lasa izay. Asa izay ho tonga aloha, ny zaza sa ny vaovao manambara ny fandresen’andriamatoa vadin’ny minisitra Briand Andrianirina teo amin’ny fifidianana ny Filohan’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra?
Tokony tsy ho ela intsony dia hiroso amin’ny fandatsaham-bato ireo mpifidy nefa moa mbola misy korontana tsy mety voasoroka atsy sy eroa toy ny any Bongolava, fomba tsy maintsy tanterahina mba hampiavaka marina an’ireo mpifidy ara-dalàna.
Eto moa tsy sehatra voatokana hiadin-kevitra momba izany. Na koa sehatra hanaovana fampielezan-kevitra sy fandresen-dahatra. Ho an’ingahy Andrianirina manokana dia tsy vitan’ny manana ny maha izy azy ny tenany fa araky ny filazan’ny mpialona dia nihetsiketsika mafy Ramatoa vadiny tamin’ny fitondrana fanohanana azy, isak’izay nanao fitsidiham-paritany amin’ny maha minisitra azy hono Ramatoa Onitiana Realy dia nirongo baolina sy karazana fitaovana fanatanjahantena ho zaraina. Iaraha-mahafantatra moa fa tsy nitsitsy mihitsy amin’ny fanaovana fitsidihana ny vahoaka ity minisitra ity, noho ny vesatra ao an-kibony ankehitriny angamba dia tsy maintsy hitandri-tena izy eo am-piandrasana ny vahiny kely.
Ny fifaninanana ho Filohan’ny Federasionan’ny baolina kitra dia toy ny tontolon’ny fifidianana ho an’ny toerana sady be voninahitra no be vola kirakiraina. Asa na azo lazaina hoe tontolo feno fahalotona na tontolo tsy mangarahara. Tsy ilaozan’ny fifamingampinganana na ny fifanaovana don-tandroka. Tsy mendrika daholo moa izany rehetra izany. Aiza marina moa no misy sehatra ahafahana hamirapiratra ao anaty fanajan-tena sy fahamendrehana ? Misy izany hono, nefa tsy tandrina miavaka eto amin’ny fiaraha-monina. Tandrovan’ny olon-kendry maro ankehitriny ny tsy hiheverana azy ho ankoso-bolamena hany ka aleon’izy ireny manetritena mangingina eny amin’ny sisiny.